ဘရိတ် pads ရော်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့လား - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > ရော်ဘာဘရိတ် pads - အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်
ရော်ဘာဘရိတ် pads - အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်
ဘရိတ် pads ရော်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့လား
အော်ဂဲနစ်ဘရိတ် padsအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရောင်းချသောကားသစ်များ၏ ၆၇% တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောကားများဖြစ်သည်လုပ်တယ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အမျှင်များနှင့်ပစ္စည်းများအရောအနှော၏ရာဘာကာဗွန်ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဖန်ခွက်များ၊ ဖန်ထည်၊ ဖန်မျှင်များ၊ ကယ်ဗလာနှင့်အခြားအရာများပါဝင်ပြီးဗဓေလသစ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ဘီးအနားကွပ်ဘရိတ်စနစ်များရှိဘရိတ်နေရာတွင်အစားထိုးသွားမည်။ ဘရိတ်အုပ်ခြင်းအစားထိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Park Tool Guide Rim Brakes ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီအကြောင်းအရာကိုစီးရီးထဲမှာဘယ်လိုစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ဒီဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဖွင့်ကြရအောင် သင်၏စက်ဘီးပေါ်ရှိဘရိတ်အုပ်စနစ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးသင့်အားအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ ထို့နောက်သင်၏ဘရိတ်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အချို့သောနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်အခြားဆောင်းပါးတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးပါမည်။
brevard NC တောင်တက်စက်ဘီး
စလိုက်ကြစို့။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကိရိယာများတွင်ဘရိတ်များနှင့် caliper အစုအစည်းများကိုညှိရန် hex လိမ်ဖဲ့ခြင်းများ၊ ယခု pads များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းအနားကွပ်ဘရိတ်အုပ်ခြင်းအတွက်အခြေခံစနစ် ၃ ခုရှိသည်။ လမ်း၊ ချည်လုံးနှင့်ချောမွေ့သောတွယ်ကပ်မှု။ သင်၌သင့်စနစ်ကိုမည်သို့ခွဲခြားသိနိုင်မည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။ သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းစဉ်။
ချောချောမွေ့မွေ့သောသော့ခလောက်စနစ်ဖြင့်ပို့စ်သည် pad မှထွက်လာပြီးဘရိတ် caliper ရှိယန္တရားတစ်ခုဖြင့်ညှပ်ထားသည်။ ထိုင်ခုံတိုင်မှာချည်မျှမရှိပါ။ အဆိုပါပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ဘရိတ်စနစ်နှင့်ချည်သော့ခလောက် system ကိုဆင်တူကြည့်ရှုပါ။
သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးသော့၏အဆုံးမှာ caliper မှပူးတွဲပါ။ ပြိုင်ကားစက်ဘီးနှင့်ချည်လုံးကြိုးကြိုးအကြားအကောင်းဆုံးခွဲခြားမှုမှာကြိုးချည်လုံးပြားများသည်ခုံးနှစ်ခုနှင့်ခုံအကွာအဝေးနှစ်ခုရှိသည်။ လမ်းဘရိတ်အုပ်ထဲတွင်ပါးနပ်သောအဝတ်အစားနှင့်နဂိုကတည်းကအကွာအဝေးတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်ခုံးနှစ်ခုနှင့်ခုံအကွာအဝေးနှစ်ခုတွဲခြင်းမရှိပါ။
ဤစက်စနစ်သုံးခုစလုံးကိုဒြပ်ဆွဲခြင်းနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်တလုံးတည်းပါသော pad သို့မဟုတ်အရောင်အ ၀ န်းနှင့်ထွက်ပေါက်ရှိသည့်ကျည်တောင့်တစ်ခုတွင်ရနိုင်သည်။ အကယ်၍ အရာတစ်ခုသည်စနစ်တစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီပါကအဆင်ပြေပါက၊ တစ်လုံးတည်းပါသည့်ပါတင့်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုပုံစံပြားပါသည့်ယူနစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးပါ။ အခု system တစ်ခုစီအတွက် process ကိုသွားကြည့်ရအောင်။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဤဆောင်းပါး၏အပိုင်းသို့ခုန်။
လမ်းဘရိတ်အုပ်စနစ်နှင့်စတင်ပြီး pad တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ၊ ဘီးမရှိလျှင်၊ pad စွဲစေခြင်းကိုလျှော့ချပြီးလက်မောင်းမှ pad ကိုဖယ်ရှားပါ။ ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ခြမ်းရှိရှေ့သို့မြှားနှင့်အမှတ်အသားများအတွက် pads အသစ်များကိုစစ်ဆေးပါ။
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသူသည်တံခါးပိတ်နှင့်ပွင့်နေသည့်အဖွင့်ရှိလျှင်၊ အညီအဖုံးများ install လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကက်စကတ် pads များထဲမှ pad ပစ္စည်းများကိုသာအစားထိုးနေပါက၊ ဆက်ထိန်းထားသောဝက်အူသို့မဟုတ်ကလစ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဆွဲထုတ်ရန်နောက်သို့ဆွဲပါ။
အသစ် pads စစ်ဆေးပါ။ ဆက်ထားသည့်ဝက်အူသို့မဟုတ်ကလစ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ပခုံး၏နောက်ဘက်တွင် groove တစ်ခုရှိသည်။ pad အသစ်ကိုနေရာအပြည့်သို့တွန်းတင်ပါ။ ဆက်လက်ထိန်းထားသည့်ဝက်အူသို့မဟုတ်ကလစ်ကိုတပ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်ကယ်စက်ဘီးပေါ်မှ pads များကိုအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်။ သို့သော်ဘရိတ်များအားစနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အပိုချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်နှင့်တွဲဖက်သည့် caliper အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင့်အားနောက်ဆုံးချိန်ညှိမှုများအတွက်သင့်အားကူညီရန်ဤဆောင်းပါးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာစတင်ချိန်များရှိသည်။
ငါကြိုးချည်ထည် pad ပါအစားထိုးမှတဆင့်သွားပါလိမ့်မယ်သင်ပထမ ဦး ဆုံး pad ပါပရိသတစ်ခုလုံးကိုအစားထိုး၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မစတင်မှီကျွန်ုပ်တို့သည် spacer ရွေးချယ်မှုကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအခြားစက်ဘီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောနှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ထားသောအနံနှင့်ကျဉ်းသောနဂိုအတိုင်းဖြစ်သည့်ဘရိတ်အုပ်များအနားကွပ်သို့ရောက်သောအခါ caliper လက်မောင်းကိုနေရာချပေးသည်။
အကောင်းဆုံးကတော့, ကျနော်တို့ဘရိတ် pad ကိုအနားကွပ်သို့ရောက်သည့်အခါ caliper လက်မောင်းကိုဒေါင်လိုက်နီးစေချင်သည်။ ကားမောင်းသူ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ဤကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးအတွင်း၌ရှိပြီး Kalip လက်မောင်းသည်အပြင်ဘက်သို့ရောက်ရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒီစက်ဘီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်လိုချင်တယ်။
ငါတို့ရဲ့စက်ဘီးကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်အတွင်းဘက်အနည်းငယ်ထောင့်ကိုမြင်နိုင်တယ်။ ပစ္စည်းအသစ်များပါသည့် pad အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်၎င်းမျဉ်းအားဒေါင်လိုက်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် spacer တိမ်းညွတ်မှုကိုအတူတူထားရန်စီစဉ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီးကိုလမ်းမှဖယ်ထုတ်ရုံသာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်ချောင်လာပါက mounting nut, spacers နှင့် brake pad တို့ကို caliper လက်မောင်းမှ spacer alignment သို့ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။
ခင်းထားသောလမ်းအသစ်ကိုမည်သည့်ဘက်တွင်တပ်ဆင်သင့်ကြောင်းညွှန်ပြသည့် ဦး တည်ရာမြားအတွက်အသစ် pads များကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ကိုင်ဆောင်သူတွင်တံခါးပိတ်နှင့်ဘေးထွက်ရှိပါကတံခါးပိတ်ဘက်သည်အမြဲတမ်းရှေ့သို့သွားသည်။ နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်တိမ်းညွတ်ပြီးနောက်လမ်းအသစ်ကိုတပ်ဆင်ပါ။
ဒုတိယကျောက်ခင်းရှေ့တွင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကက်စကတ်ပြားများပေါ်တွင်ပါသည့်ပစ္စည်းများကိုသာအစားထိုးပါက၊ ဆက်ထိန်းထားသောဝက်အူသို့မဟုတ်ကလစ်ကိုဖယ်ရှားပြီးဆွဲထုတ်ရန်နောက်သို့ဆွဲပါ။ အသစ် pads ထွက်စစ်ဆေးပါနှင့် pad ၏ကွေးရှာပါ။
အဆိုပါကွေး၏ကွေးကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။ ဆက်ထိန်းထားသောကလစ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပခုံး၏နောက်ဘက်တွင် groove တစ်ခုရှိသည်။ pad ပါထဲသို့တွန်းပါ။ ဆက်ထိန်းကလစ်ကိုပူးပါ။
ဤအရာသည် pads ကိုချည်နှောင်သောသော့များဖြင့်အစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသော်လည်းဘရိတ်ကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်အပိုချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်နှင့်တွဲဖက်သည့် caliper အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင့်အားနောက်ဆုံးချိန်ညှိမှုများအတွက်သင့်အားကူညီရန်ဤဆောင်းပါးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာစတင်ချိန်များရှိသည်။ အခုတော့ဘရိတ်အုပ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုငါဖြတ်သန်းသွားမယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘီးမပါဘဲမကြာခဏပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အဆိုပါ caliper လက်မောင်းနှင့် pad ပါသော့ခလောက်စစ်ဆေးပါနှင့်နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်၏ orientation ကိုသတိပြုပါ။ မကြာခဏခုံးများနှင့်ခွက်လျှော်ထားသောအဝတ်လျှော်များမကြာခဏများပြားတန်းညှိခြင်းကိုခွင့်ပြုပြီး၎င်းတို့ကိုမှန်ကန်စွာပြန်လည်တပ်ဆင်ရမည်။
screw key ကိုနေရာတကျထားရန် Allen key ကို အသုံးပြု၍ bolt ကိုလွတ်မြောက်စေရန် mounting nut ကို wrench ဖြင့်ဖြေပါ။ ဘရိတ်အုပ်အသစ်အားမည်သည့်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ရမည်ကိုညွှန်ပြသည့် 'ရှေ့' မြှားတစ်ခုချင်းစီကိုသတိပြုပါ။ အရပျသို့သစ်ကို pad ပါစည်းဝေးပွဲကိုလျှော။
ဒုတိယ pad အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ pad ပစ္စည်းကိုကက်ဆက် pads များဖြင့်အစားထိုးရန် ဦး စွာ pad pad ၏နောက်ဘက်တွင် bracket clip (သို့) ဝက်အူကိုရှာပြီးဖယ်ပါ။ ထို့နောက် pad ကိုနောက်သို့ဆွဲထုတ်ပါ။ ၎င်းအား cartridge ကိုင်ဆောင်ထားသူမှဆွဲထုတ်ပါ။ pads အသစ်များကိုစစ်ဆေးပါ။ သိမ်းဆည်းထားသည့်ကလစ်ကိုလက်ခံရန်ဘောင်ခွေ၏နောက်ဘက်ရှိဘရိတ်ဘောက်များကိုအပြည့်အဝဖိ။ ကလစ်ကိုပူးတွဲပါ။ ဤသည်က cleat နံရံကိုချောချောမွေ့မွေ့အစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသော်လည်းဘရိတ်ကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အပိုချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ချောသောချွတ်ယွင်းစေသောဘရိတ်ပြားများအတွက်ဤနောက်ဆုံးဆောင်းပါးနှင့်သင့်လျော်သောအချိန်တွင်ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနားကွပ်ဘရိတ်အစားထိုးဆောင်းပါးကိုကြည့်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်အရင်ကမတွေ့ဖူးပါက Rim Brakes အတွက် Park Tool လမ်းညွှန်ကိုစီစဉ်စဉ်ကြည့်ရှုရန်ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ၊ နောက်ဆုံး Park Park ဆောင်းပါးများကိုသေချာစွာစာရင်းသွင်းပါ။
ဘယ်လိုစက်ဘီးဘရိတ် pads တွေကအကောင်းဆုံးလဲ။
အကောင်းဆုံးယေဘုယျအား။ Swiss Stop FlashPro မူရင်းအနက်ရောင်ဘရိတ်။
အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး။ Alritzစက်ဘီးဘရိတ် padsသတ်မှတ်မည်
အကောင်းဆုံးပေါ့ပေါ့ပါးပါးမြင်းစီးသူရဲအဘို့။ SHIMANO2Pairs Discဘရိတ်။
အကောင်းဆုံးတောင်တန်းအတွက်စက်ဘီးစီး။ Kool Stop နှစ်ဆပေါင်းစပ်တောင်ပုတီး။
၁၃ နို ၀ ဒီဇင်ဘာ 2019
ဒီတော့ GCN Tech Clinic မှာခင်ဗျားရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာပြ,နာ၊ မေးခွန်းဒါမှမဟုတ်မေးခွန်းကိုပြန်ပြောဖို့လိုတယ်။ Konstantin က 'Brake Pads' ဆိုတာသိချင်တယ်။ ငါကာဗွန်အနားကွပ်များသည်ကာဗွန်ကင်းစင်သောဘရိတ်ပြားများကိုလျင်မြန်စွာအသုံးချနိုင်ကြောင်းသိရှိသော်လည်းအခြားတစ်လမ်းကိုလည်းလည်ပတ်နိုင်မည်လော။ သတ္တုစပ်ဘီးများပေါ်တွင်ကာဗွန်အထူးဘရိတ်ပြားများတပ်ဆင်ခြင်းသည်လုံခြုံပါသလား။ ထို့အပြင်အနားကွပ်အမျိုးအစားများအတွက်လည်းရာသီဥတုအမျိုးအစားများအတွက်။ ဒါပေမယ့်ဒီကာဗွန် - အထူးပြုရော်ဘာတွေနဲ့ကပ်ပြီးလုပ်ကြရအောင်။
ဒါကြောင့်သူတို့ဟာယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သောကြောင့်ကာဗွန်အနိမ့်အမြင့်များမှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ သတိရရမည့်အချက်တစ်ခုမှာသင်သည်၎င်းကိုအလူမီနီယံအနားကွပ်တွင်အသုံးပြုပါက၎င်းအဘပ်များတွင်လူမီနီယမ်အသေးငယ်များကို အသုံးပြု၍ ဘရိတ်လိုက်သောအခါသင်လည်းဘရိတ်မသွားနိုင်ပါ။ သင်၏ကာဗွန်ဘီးကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်ပြန်သွားသည့်အခါထိုအလူမီနီယမ်၏အလွန်သေးငယ်သောအနိမ့်အမြင့်သည်သင်၏ဘရိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးချနိုင်သောအနုပညာအပိုင်းအစများဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ချက်ချင်းသတိထားမိမှာမဟုတ်ပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီဟာကဘရိတ် pads အသစ်တစ်ခုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ငါအလုပ်အတွက်တိကျသော pads အချို့ကိုသာသုံးလိမ့်မည်။ ရော့ဂျုံးစ်မှ 'ဟိုင်းဂျွန်' ဟုမေးသောမေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်တွင်လက်ရှိတွင် ၅၂ မှ ၃၆ ရှိပြီး ၁၁-၂၈ ကက်ဆက်တစ်လုံးရှိသည်။ 'သူက ၃၆ အစား ၃၄ bezel ကိုထည့်နိုင်သလား။ ဒါမှမဟုတ်ကက်ဆက်ကိုပြောင်းတာကပိုကောင်းတာလား။ ပြီးတော့သူက Di2 ရှိတယ်။
သတင်းကောင်း, ရော့, ငါကအစောပိုင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ဤကြိုးစားခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သင်မှတ်ချက်များအတွက်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ်။ အလေးအနက်ထားသင့်ပါတယ်၊ ဒါဆို ၅၂၊ ၅၀ ကို ၃၄ သို့လျှော့ချနိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အပြောင်းအလဲသည်တောက်ပလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင့်မှာ Di2 derailleur ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတခါတရံကစားခဲ့စဉ်ကကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံလက်ဆောင်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသောဘဲဥပုံကွင်းကြိုးအချို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အဆုံးသတ်လမ်းကြောင်းလွဲသွားသောကြိုးများအမြောက်အမြားကိုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ရှေ့လည်ပင်းကိုကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုမှန်အောင်လုပ်ပါ။ ငါအဆုံးသတ်အရှုံးပေးလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သတင်းကောင်းကတော့မင်းမှာ Di2 mech ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာကစားနိုင်၊ ပြီးပြည့်စုံဖို့အတွက်ရှေ့မျက်နှာကိုအပေါ်တက်ဆင်းရွေ့လျားနိုင်တယ်၊
သတိရရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ အကယ်၍ သင်သည် အကယ်၍ သင်သည်သေးငယ်သောကွင်းကြိုးနှင့်အသေးဆုံးနောက်ဘက်ကြယ်ပွင့် ၁၁ သို့မဟုတ် ၁၂ ကိုအသုံးပြုပါကကွင်းဆက်သည်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဒါကိုတကယ်မလိုချင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပွတ်လိုက်တာနဲ့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မပေးလို့ပဲ။ ကောင်းပြီ၊ နောက်တစ်ခါ Toasty Bear မှ Di2 10/11 မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲနှင့်လိုက်ဖက်သောပြ'နာနှင့်စပ်လျဉ်း။ မေးသောမေးခွန်းမှာအမြန်နှုန်း (၁၁) မြန်နှုန်း (Cage တစ်ခုအထိပိုမြန်နိုင်သည်) ကိုသွားရန်ဖြစ်သည်။ ဂီယာ shifters များသည်ခလုတ်များသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့တွင်ပရိုဂရမ်မရှိပါက၎င်းသည်အသစ်တစ်ခုကိုရနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါလော။ Gear lever, 'သင်မူတည်လို့ရလား။ ' လုံးဝမှန်ကန်သော, ဟောင်း Shimano 7970 နှင့်မတူဘဲ, ငါထင်, groupset ။
၎င်းသည် Dura-Ace Di2 ၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာငါးဝါယာကြိုး signal ကိုအသုံးပြုခဲ့သဖြင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောဝါယာကြိုးတစ်ခုတွင် wires အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ အခြားအရာအားလုံးကအဲဒီအချိန်ကစပြီးမတူညီတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုလာကြတဲ့အတွက်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လုံးဝသဟဇာတဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်သင်သေနေပြီ။
ငါတကယ်တော့အိမ်မှာအိမ်သုံး 11-speed 9150 Dura-Ace Di2rear နောက်ကျော derailleurs ကိုသုံးတယ်၊ ဒါကအချို့ Ultegra 6770 10-speed shifters နှင့်တွဲဖက်ပြီးလုံးဝအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ မင်းဒါကိုပေါင်းလို့ရတယ် မြန်နှုန်း (၁၁) မြန်နှုန်းရှိရှေ့ကျောလှည့်စက်များနှင့်ရှေ့မြန်နှုန်း (၁၀) ခုပါသောရှေ့ပြေးမောင်းနှင်စက်များနှင့်လိုက်ဖက်သောပြissuesနာအချို့ရှိသည်။ သင်ပြောင်းလဲမှုများကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Chris Poyser ကတော့မင်္ဂလာပါ။ အမြဲတမ်းပြသနိုင်မှာပါ။ နွေရာသီစက်ဘီးပေါ်ရှိအနေအထားကိုပြန်လည်ဖော်ပြရန်ဆောင်းရာသီလေဖြတ်သောကျောက်စရစ်စက်ဘီးအတွက်ပင်စည်အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူသောအခါ 'ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်စက်စက်ကျရန်လိုအပ်သနည်း။ 'ဟင်ခရစ်၊ တကယ်မေးခွန်းကောင်းပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ခင်ဗျားရဲ့ဆောင်းစက်ဘီးဒါမှမဟုတ်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးဟာရန်လိုတဲ့ပြိုင်ဘက်အနေအထားရှိနိုင်တဲ့နွေရာသီစက်ဘီးထက်အနည်းငယ်ပိုသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အနေအထားကိုယူလိမ့်မယ်။ ပါရမီရှင်ပါရမီပါရမီရှင်ပါ။ ကျွန်တော်သည်ပါရမီရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရရှိဖို့သေချာအောင်ပင်မထောင့်များနှင့်အရှည်များကိုအမှန်တကယ်ကူညီဖို့အရင်ကကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီလင့်ခ်ဟာအခုလက်ရှိဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပါ၊ အောက်ကဖော်ပြချက်မှာပါ။ ဒါကြောင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့ပတ်ပတ်လည်ကစားပါ၊ အဲ့ဒီအနေအထားကိုပုံတူပွားနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး Nooksak က 'ဟောင်းနွမ်းနေသောကက်ဆက်ပေါ်၌ကွင်းဆက်အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကွင်းဆက်ကိုပျက်ပြားစေသလားဟုမေးနေသောနူးကတ်မှမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။ 'မင်းကချိန်ခွင်လျှာကိုစက်ဘီးအဟောင်းအဖြစ်ထားချင်တယ်၊ မင်းရဲ့ကွင်းဆက်ကိုမဖျက်ဆီးချင်ဘူး။ ဒါကတကယ်တော့သင်ဟာဒီ turbo trainer တာယာများထဲမှတစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည်။
ငါက trekking rim ဒါမှမဟုတ် hybrid rimm ကို ၀ ယ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့်တာယာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာကပိုပြီးကျယ်ပြန့်တယ်၊ အခုဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်ဟုတ်ကဲ့၊ အကယ်၍ သင်သည်ကက်ဆက်အဟောင်းတစ်ခုတွင်ကွင်းဆက်အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲကွင်းဆက်သည်အချိန်မတန်ဘဲပျောက်သွားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဆီကနိမ့်နိူင်တဲ့ကက်ဆက်တစ်လုံးကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်၊
ဒါကြောင့်သင်ကဒီကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဂီယာအပြောင်းအလဲတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့အဲဒါဟာအနိမ့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရေးမထားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုအပြင်မှာသုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့နောက် Kristinn က 'ငါ Shimano ၁၀၅ ဘရိတ်နှင့် Sora shifters များနှင့်မထိုက်မတန်' သိလိုပါသလား။ 'ဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့လီဗာကိုဆွဲရတာကွာခြားချက်ရှိလား။ အခြားသူများထက်ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ။ တကယ်တော့သူတို့အားလုံးလုပ်တယ်၊ မဟုတ်ရင်လူတိုင်းကသာရောနှောပြီးကိုက်ညီနိုင်တယ်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ Shimano lever များသည် Shimano brake caliper နှင့်အတူတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ယခုအခါ၎င်းတို့သည်ပြင်ပကေဘယ်လ်ကြိုးနှင့် caliper ကိုယ်နှိုက်သို့မည်မျှကြိုးများဖြတ်သန်းသွားသည်အပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လုံးဝသဟဇာတဖြစ်မည်မဟုတ်ဘဲကွာခြားချက်သည်အနည်းငယ်သေးငယ်သွားမည်ဖြစ်ရာအားလုံးသွားရန်ကောင်းသည်။ သို့သော်သင်မလုပ်ချင်သောအရာသည် SHRM calipers ကို Shimano lever နှင့် Campagnolo calipers နှင့် SHRM lever နှင့်ရောနှော။ ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အဲဒီထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး တည်းကိုပဲစွဲစွဲမြဲမြဲကြိုးစားပါ။ နောက်ထပ်တာယာမေးခွန်းတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်သည်တာယာဆိုင်ရာပြissuesနာများကြောင့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် ၀ မ်းနည်းမိသည်။ ယခုဟမ်ဘာတိုလီယန်ဒိုးသည် 'အကယ်၍ အကောင်းအဆိုးများသည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းပြွန်တွင်ထိုးဖောက်ခံထားရလျှင်၊ ' သူတို့ကပြားချပ်ချပ်ပြီးနောက်စွန့်ပစ်ခံထားရပြီလား 'သို့မဟုတ်သူတို့သိချင်နေနိုင်သည်။ ပြန်ပြင်ပြီးသုံးတာလား ' ဟုတ်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကပဲသူတို့ကိုပစ်ချ။
အကြောင်းပြချက်မှာကမကထပြုသူကသူတို့အသစ်များကိုသာဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ရန်အလုံအလောက်ရရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ အထူးမဟုတ်ပါဘူး။ ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ကောင်းသည်၊ သို့သော်အသင်းကပြိုင်ပွဲ၏အနိုင်ရရှိမှုနှင့်ရလဒ်များကိုသာစဉ်းစားသည်။
အခုတော့သူတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာအဖွဲ့ကသူတို့ကိုပြန်ကောက်ပြီးသူတို့ကို patch ပေးပြီးယာဉ်မောင်းတစ် ဦး ကိုပေးလိုက်ပြီးသူတို့လက်တွေ့မှာအသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်ပညာရှင်အများစုသည် tubular တာယာများကိုမလေ့ကျင့်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ clincher tyres များထိတွေ့မိလို့ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအဲဒါတွေကိုပြင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာ tubular base tape ကိုဖြတ်ပြီးတာယာရဲ့အသေကောင်ကိုချည်ခြင်း၊ ပြွန်ကိုပြုပြင်ပြီးအရာအားလုံးကိုအတူတကွချုပ်တည်းခြင်းအားဖြင့်အထူးသဖြင့်မလွယ်ကူပါ။ ပြီးတော့ပြီးတော့ baseband ကိုသွားဖို့လိုတယ်။
သင်လမ်းဘေးတွင်သင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ သင်သဘောတူမည်ဟုသင်သေချာပါသည်။ Asy Threlfall က 'ဟွန် Jon' လို့သိချင်တယ်။ တကယ်စီးရီး၏ကြီးမားသောပန်ကာ။ 'ဒါမင်းကိုချစ်လား Di2 နှင့် Multiplift ပြောင်းခြင်း၏ကောင်းကျိုးသို့မဟုတ်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။ Hello Hello, Shimano's Di2 ကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ Di2 Multi-shift function, ဆိုလိုတာကဂီယာခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားဂီယာအပြောင်းအလဲများရှိသည်။
အခုတော့အဲဒါအတွက်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တကယ်မစဉ်းစားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဂီယာအမြောက်အများကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပြောင်းချင်တာမကြာခဏဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။ ငါစဉ်းစားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာကသင်သည်စာသားအတိုင်း roller coaster ကိုစီးနင်းလိုက်ပါကဤမျှတကယ့်ကိုအောက်သို့ပြန်ဆင်းသွားလျှင်တကယ့်မတ်စောက်သော၊ ထို့နောက်ရုတ်တရက်တကယ့်ကိုအလွန်မတ်စောက်သောကျဆင်းမှုဖြစ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဂီယာသို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူး။
Cons, ငါအနည်းငယ်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းကိုခလုတ်ပေါ်တွင်ကြာကြာထားမည်ဆိုလျှင်သင်အလိုရှိသည်ထက်ဂီယာအမြောက်အများကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်မည်၊ ထို့ကြောင့်ဤအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဂီယာမရှိတော့ပါ၊ သို့သော်သင်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူသည်ကိုသိသည်၊ YouTube ဆော့ဖ်ဝဲကိုစက်ဘီးစီးပြီးပတ်ပတ်လည်ကစားပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါက default shift သို့သာပြောင်းနိုင်သည်။
McDonald ဟက် mish စက်ဘီးအသစ်တစ်စီးဝယ်ပြီးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးပထမဆုံးအကြိမ်စီးနင်းခဲ့ပြီးသူတို့မှာရေကိုင်နေတယ်ဆိုတာသတိပြုမိလိုက်သည်။ စိုးရိမ်စရာတစ်ခုခုရှိလား။ , ဤစက်ဘီးအသစ်များကိုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်မတူပါ၊ သို့သော်နက်ရှိုင်းသောစက်ဘီးအများစုသည်၎င်းတို့တွင်ရေအနည်းငယ်စုဆောင်းလေ့ရှိသည်။ ကွယ်ပျောက်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူး၊ ဘယ်မှာလဲမသိဘူး။
စက်ဘီးကိုသတင်းစာပေါ်တင်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အေးဆေးငြိမ်သက်အောင်ရေကိုသေချာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အချို့သောအနားကွပ်များသည်အမှန်တကယ်တွင်အပေါက်ငယ်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်။ သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၌ clincher တာယာများရှိပြီးရေထုတ်ယူခြင်းကိုအလွန်စိုးရိမ်နေပါက၊ တာယာများကိုချွတ်။ အနားကွပ်တိပ်ကိုဖယ်ရှား။ သွန်းလောင်းပါ။
ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်အနီးမှာထားနိုင်ပါတယ်။ Garry Street က 'Jon၊ ကူညီပေးပါ' လို့သိချင်တယ်။ ငါ 2017 လျှောပို့စ်နှင့်အတူ Roubaix စားကြ၏။ သူသည်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရှင်းလင်းခဲ့သည်။
သူသည်သော့ခလောက်များကိုမကျော်လွှားလိုပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် Roubaix ဘောင်ဖြစ်ပြီးထိုင်ခုံညှပ်ခြင်းကို ပိုမို၍ လိုက်နာရန်အနိမ့်တပ်ထားသည်။ 'အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုရှိလား။ ကောင်းပြီ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ မင်းကဒီချုပ်ကိုင်မှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်နဲ့ torque လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုနေတယ်၊ ​​ကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာလူအများစုကမသုံးကြဘူး၊ ဖြစ်နိုင်ရင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပုံကိုငါမပြောနိုင်ဘူး၊ အချို့သော calipers များသည်ထိုင်ခုံတိုင်နှင့်ဘောင်တို့၏အချင်းအတိအကျကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ ၀.၂ မီလီမီတာတိုးလာတာမို့သူတို့ဘောင်မှာထိုင်ခုံနေရာမှားယွင်းမှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ၀.၂ မီလီမီတာကသူတို့ interface ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုတကယ်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
သင်စမ်းကြည့်နိုင်သောအရာသည်နည်းနည်းလေး hack သို့မဟုတ်၎င်းသည်လိုလားသူတစ် ဦး ၏စက်ဘီးပေါ်တွင်ပင်ကြိုတင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသော botch ဖြစ်သော်လည်းလူမီနီယမ်ဆိုဒါဘူးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ကဂရုတစိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးထုပ်လိုက်တယ်။ ထိုင်ခုံတိုင်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ ထည့်လိုက်တယ်။ ထိုင်ခုံညှပ်ခလုတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ အားလုံးကောင်းတယ်။ တစ်ခုခုဟက်ကာများ, botched တစ်ခုခု။
အောက်ဆုံးလိုင်းကိုသင်၏ဒေသဆိုင်သို့ယူသွားပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအကုန်စစ်ဆေးပါ။ တကယ်တော့ဒီပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမူဘောင်နှင့်အတူတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုသီတင်းပတ်၏နောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာ 'ကျွမ်းကျင်သူများသည်သူတို့၏ tubular tyres များတွင် sealants များအသုံးပြုကြသလား' ဟုမေးနေသော Max Grass မှဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည် 'သိပ္ပံပညာရှင်တွေရော၊ Setup, ဒါမှမဟုတ်အားလုံး tubular လား 'ကောင်းပြီ၊ အဆင်ပြေသည်၊ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန်အတွက်၊ သင်အမှန်တကယ်အား sealant ကိုပြွန်၊ တာယာသို့မဟုတ် tubular ထဲသို့အမှန်တကယ်ထည့်နိုင်သည်။ နောက်ကွယ်မှအကြံသည် အကယ်၍ သင်ထိုးဖေါက်ခြင်းပြုပါက၊ ထိုတံဆိပ်ခတ်သည်သင် don လုပ်သကဲ့သို့တွင်းတစ်တွင်း၌တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တာယာဖိအား (သို့) အလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏကိုမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။
၎င်းကိုအသုံးပြုသော Pros၊ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည်လှိမ့်တွန်းလှန်မှုကိုဘီးများတပ်ဆင်ခြင်းကိုစတင်ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့်မလိုအပ်ဘဲအပိုအလေးချိန်ထပ်တိုးစေသည်။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်အနီးအနားရှိအဖွဲ့ကားတစ်စီးရှိသည်။ ရေဒီယိုဖြင့်အလွယ်တကူ ရောက်ရှိ၍ မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သော Paris-Roubaix ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤပြိုင်ပွဲတွင်ပြိုင်ပွဲ၏ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ရှည်လျားသောကာလအတွင်းကွဲသွားလေ့ရှိသောကြောင့်ပြိုင်ပွဲတွင်အသင်းနှင့်နီးကပ်သည့်အသင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ မြေပြင်။
ဒါကမြင်းစီးသူရဲကိုသူတို့ရဲ့ tubular မှာသုံးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်။ တကယ်တော့ tubular setups ကိုသုံးတဲ့မြင်းစီးသူရဲတွေအတွက်ငါသိသလောက်တော့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသူတို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ Hutchinson တာယာတွေစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်ထင်တယ်။ မသေချာပေမဲ့ငါသိမ်းထားမယ်။ မျက်စိဖွင့်ပြီးငါကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါအကြောင်းကြားမယ်၊ ဒါကငါတို့ပြပွဲရဲ့အဆုံးမှာပေါ့။ သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာမေးမြန်းချက်များ၊ မေးခွန်းများနှင့်ပြissuesနာများကိုကျွန်ုပ်၏လူမှုမီဒီယာအားလုံးတွင် #ASKGCNTECH ဖြင့်အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင်ထားရန်မမေ့ပါနှင့်။
ယခုဤဆောင်းပါးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသင်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုမျှဝေရန်သတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်၏ကြီးမားသောလက်မထောင်ပါစေနှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုပြောပြပါ။ မင်းမှာပြaနာတစ်ခုရှိရင်ငါ့အတွက်ဒီနေရာကိုချန်ထားလိုက်ပါ။ shop.globalcylcingnetwork.com ရှိ GCN ဆိုင်သို့လည်းသွားရန်သတိရပါ၊ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံး GCN နည်းပညာပြပွဲကိုအောက်တွင်သာကြည့်နိုင်သည်။
ဘယ်ဘရိတ် pads အမျိုးအစားကအရှည်ဆုံးလဲ။
ပြီးတော့သူတို့အရှည်ဆုံးကနောက်ဆုံး။ ကြွေထည်ကွမ်းယာဆိုင်ထို့အပြင်တစ် ဦး firmer သည်ဘရိတ်အော်ဂဲနစ်ထက်နင်းကွမ်းယာဆိုင်။ သူတို့ကအတော်လေးအဖြစ်ကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်ကြဘူးကွမ်းယာဆိုင်အလွန်အမင်းအအေးမိခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အသုံးပြုမှုကိုကောင်းစွာသင့်လျော်မရှိကြပေ။ သို့သော်ကြွေထည်ဘရိတ် pads, တိတ်ဆိတ်အဆင်ပြေများနှင့်တာရှည်ခံဖြစ်ကြသည်ကွမ်းယာဆိုင်နေ့စဉ်မောင်းနှင်မှုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။၂၃ ဇန်နဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
Jimmy ကဟေးဖြစ်သူ Scotty ကိုဘယ်ဘရိတ် pads ကတာရှည်ခံစေသလဲ၊ သူတို့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဘရိတ်ပြားအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်၊ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အတွက် Asbestos ကိုမသုံးတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအမျိုးမျိုးသောအရာတွေ၊ အသံကိုသင်မကြိုက်လျှင်၊ ကားသည်ကြွေနှင့်အတူလာလျှင်၊ အစားထိုးကြွေပြားများရှိသည် (သို့) ၎င်းတို့သည်ဆူညံသံများစွာဖြစ်စေသည် (သို့) ဆူညံမှုများစွာဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်သင့်ကားသည်မူလကားမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ သင်အသံမနှစ်သက်ပါက Akebono ကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးအလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဆူညံသံမရှိဘဲကြာရှည်ခံသည်နှင့်အမျှနည်းပညာအစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသော pad များရှိသည်။ ငါ Autozone ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုငါသုံးတယ်။ သူတို့မှာတစ်သက်တာအတွက်ရွှေပြားတွေရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ toppings သူတို့ဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဆူညံသံမရှိပေမယ့်သင့်ကိုတစ်သက်တာအာမခံချက်ပေးတယ်။ သူတို့ကဟောင်းနွမ်းသွားသောအခါဘရိတ် pads အားလုံးသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကုန်သွားသည်၊ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည်အလွန်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော်လည်း၊ တစ်ချိန်ချိန်တွင်သိန်းနှင့်ချီသောဘရိတ်အုပ်ချိန်များသည်သူတို့သည်ပိုမိုပါးလွှာလာသောအခါသင်သည် ၎င်းတို့ကိုအစားထိုးပါ၊ သို့သော် Autozone သည်၎င်းတို့ကိုအခမဲ့အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၌ '94 Celica 'ကဲ့သို့သောကားများရှိခဲ့ပြီး pads ဟောင်းနွမ်းလာသောအခါအဟောင်းများကို Autozone သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့သည်သင်အသစ်များကိုအခမဲ့ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အမြဲတမ်းထာဝရတည်တံ့နေကြသည်။ ၎င်းတို့ကိုအခမဲ့အစားထိုးကြသည်။ ဒါပေမယ့်အရှည်ဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးဆူညံသံအနည်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးရော်ဘာတွေလိုချင်ရင်သင်သိပါလိမ့်မယ်။ Akebono ရော်ဘာကတကယ်တော့အကောင်းဆုံးလက်ကိုင်ကားတွေပါ။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်လူတစ်ယောက်ကိုကားတစ်စီးကိုစက်ပြင်ဆရာတစ်ယောက်ဆီဘယ်လိုခေါ်သွားရမလဲ၊ ကောင်းပြီဆိုရင်၊ ကားကိုအချိန်မီမဝယ်ပါနဲ့၊ ကားဟောင်းတစ်စီး ၀ ယ်တာဟာတကယ့်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငြင်းလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုရောင်းဖို့အလေးအနက်ထားတဲ့စိတ်ရိုးဖြောင့်သူတိုင်းကားထဲမှာမင်းနဲ့အတူကားစက်ကိုသွားမောင်းတယ်၊ အရောင်းသမားတွေကသူတို့နဲ့အတူငါလာလာတာမကြာခဏရှိခဲ့ဖူးတယ်။ Idon ကကိစ္စမရှိဘူး၊ ငါရောင်းသူကိုသာကြည့်ပြီးပြောတယ် ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာသတင်းအချက်အလက်မလိုအပ်ပါဘူး၊ သင်သိတယ်၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ငါနဲ့စကားမပြောတော့ဘူး၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းရဲ့ကားလို့ပြောရင်ငါသိတယ်၊ အဲဒီမှာထိုင်ခင်းထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့လူမပါဘဲဖောက်သည်နဲ့စကားပြောနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟေးငါလူမှုရေးဖိအားကိုငါဂရုမစိုက်ဘူး , ငါလူတစ် ဦး အားထိုလူအားအမှန်တကယ်ပြောရန်အမှန်တကယ်ပြောရန်ကျွန်ုပ်အားလစာရပါသည်။ ၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုမပြောပါနှင့်၊ ရောင်းသူကကျွန်ုပ်အားဤတွင်ပြောပါကပြtheနာများ၊ လာလာလာနှင့်ပြောပါ။ ကောင်လေးတစ်ယောက်တောင်မှသူ့ကိုခေါ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်၊ ငါကြည့်လိုက်တော့ကားကချုံးချုံးကျသွားတယ်။ ရောင်းသူကငါ့ကို Carfax ပြတယ်။ ကြည့်တယ်၊ ဒါကကျိုးပဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ငါစက္ကူအပိုင်းအစပေါ့၊ ဒီမှာကားရှိတယ်။ ဒီနေရာမှာကွဲသွားတယ်၊ လူထုံကဒါကိုတွေ့တယ်၊ ဒီတော့စက်ပြင်ကိုမလေ့လာဘူးလား။ ငါကဲ့သို့သောစက်ရုပ် မှလွဲ၍ သင်ကားဟောင်း ၀ ယ်သည့်အခါမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှမယုံပါနှင့်၊ jaguars တွင်အလုပ်လုပ်သောယောက်ျားမည်သူကိုမဆိုရယ်မောပါလိမ့်မည်။ သူသည်သင်ဤ Jaguar ကို ၀ ယ်လိုသည်။ ကားအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှာအလုပ်လုပ်ပြီးအမှန်တရားကိုပြောတယ်။ heyScotty ဟာလေးခုလို့ယူဆရင်မှားသလား။ -Cylinder Camry သည် V6 ထက်သက်တမ်းပိုရှည်သည်။ ထိုအင်ဂျင်နှစ်မျိုးလုံးသည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်သာမန်မောင်းနှင်သူကိုသာမောင်းနှင်ပါကပိုများသောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ ၄ ဆလင်ဒါပိုရှည်သည်၊ ဓာတ်ငွေ့မိုင်အကွာအဝေးရှိသည်။ V6 ကိုကြာရှည်ခံသည်နှင့်ဆွဲယူရန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ပိုရှိသဖြင့် ၄ င်းအတွင်းရှိပုံမှန်မောင်းနှင်မှုကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်မှာ၊ ၄ ဆရှိဆလင်ဒါ ၄ ခုရှိပါကမိုင်ပေါင်းငါးသောင်းရှိဆလင်ဒါ ၄ လုံးကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ နစ်ကနီ၊ မနက်ခင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြန်နှုန်းခြောက်လက်ကိုင်ဂီယာပါ ၀ င်သည့် ၅ Infinitig35 Coupe ကိုရှာနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထင်သလောက်တော့ငါအသုံးမကျတဲ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုကအလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းမှာအမြန်နှုန်း ၆ လက်ဂီယာရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး၊ ဒါတွေကဆိုးဆိုးရွားရွားဆက်ရှိနေတဲ့ဓာတ်ကူပစ္စည်းတွေပဲ။ စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်သည်မှာကုန်သည်များထံမှ catalytic converters များကိုသယ်ဆောင်သော OEM ကိုဝယ်ပါ။ သို့သော်ဤကားနှင့်ကျွန်ုပ်လုပ်ဖူးသမျှအားလုံးနီးပါးကိုဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်ကျပါမည်။ သူတို့ဟာ catalytic converter en ကျိုးသွားတဲ့အသက် (သို့) အသက်ကြီးပြီးပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စက်ပြင်စက်က scan tool ထဲမှာထည့်ပြီးစမ်းသပ်မှုကိုလွန်သွားပြီဆိုပါစို့၊ အခုတော်တော်လေးပုံသဏ္inာန်မရှိဘူး၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကစားစရာတစ်ခု၊ သင်ဈေးပေါပေါနဲ့ရနိုင်ရင်မင်းကပိုက်ဆံအများကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အဆုံးမဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်၊ ပိုကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်စျေးကြီးတဲ့ Infiniti ရဲ့ပစ္စည်းတွေရှိသေးတယ်။ လူတိုင်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဖြစ်သူ Scotty ကနယူးအင်္ဂလန်မှာနေထိုင်မယ့် Toyota 4runner အတွက်အကောင်းဆုံး primer ကဘာလဲ၊ မလိုအပ်ဘူး၊ ပြီးပြီ ပြီးတော့သူတို့ကခေတ်သစ်ကားတွေဆောက်တဲ့အခါ Toyotas ကအခြေခံအားဖြင့် Toyotas ပါ၊ သူတို့ကသူတို့ကိုဘောင်တွေ၊ ပစ္စည်းတွေအတူတကွထားတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုလျှပ်စစ်သုတ်ဆေးသုတ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့တင့်ကားဆီကိုပို့တယ်၊ ဆေးသုတ်တဲ့ polarity ကပြီးတော့ကားကိုယ်ထည်ကမတူဘူး။ polarity ကမင်းအမေတော့ primer မလိုဘူး Buffalo တွင်နေထိုင်ပြီးသူမတွင် (၁၄) နှစ် Corolla ရှိသည်။ ထိုစဉ်ကသံချေးတက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည်ထိုအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းနှင့်မှန်ကန်မှုရှိသည်။ ကားများတည်ဆောက်သောအခါသူတို့ဘာလုပ်သည်ကိုသိကြသည်။ အနည်းဆုံးတိုယိုတာသည် ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဆားတွေအများကြီးအသုံးပြုနေတဲ့inရိယာမှာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ကြမ်းပြင်ကိုသုတ်သင်ဖို့လိုနေသေးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဒီမှာနဲ့အဲဒီမှာချစ်ပ်တွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြproblemsနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ အထူးသဖြင့်တိုယိုတာသည်သင်၏ငွေကိုဤသို့သောအရာပေါ်တွင်မဖြုန်းတီးပါ။ ၎င်းသည်အရာရာတိုင်းကိုကောင်းမွန်သည်ဟု mama ကပြောသည်။ တကယ်လိုအပ်လား ကျွန်တော့် ls2 အင်ဂျင်အတွက်ဆီဖြည့်စက်ကလောင်စာဆီတိုက်ရိုက်ထိုးတာမဟုတ်ဘူး၊ တကယ်တော့မလုံဘူး။
သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆေးထိုးသည့်စနစ်များတွင်ထည့်သွင်းရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာတိုက်ရိုက်инжекторများသည်လောင်စာကိုဆလင်ဒါထဲသို့တိုက်ရိုက်၊ အခြားကားများဆိပ်ကမ်းသို့တိုက်ရိုက်လေမှုတ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Injectors များသည်စားသုံးရန်အသင့်အတင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့လေမှုတ်သောအခါအင်ဂျင်ထဲသို့ထုတ်ယူသောဓာတ်ငွေ့ကိုလေမှုတ်သောအခါ။ အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့်သူတို့အဝင်အဆို့ရှင်များအားလုံးဓာတ်ဆီကုန်ကြမ်းများဖြန်းသည်။ ဓာတ်ငွေ့ကုန်ကြမ်းသည်အလွန်ကောင်းသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကာဗွန်ကိုလုံလောက်စွာမတားဆီးနိုင်ပါ။ တိုက်ရိုက်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ယခုလေထဲဝင်လာပြီး PCV စနစ်မှဖြတ်သန်းလာသည့်ရေနံနှင့်ညစ်ညမ်းသည့်ဒြပ်ထုများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုကာကွယ်ရန်တိုက်ရိုက်အင်ဂျင်၏ထိပ်တွင်ဆီထည့်ထားပါ။ John နှင့် John 333 အဲဒါကိုတွက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ကျွန်တော့်ကားဖွင့်ပွဲမှာအသံကျယ်ကျယ်နဲ့ဆူညံသံတွေထွက်လာတယ်။ နားကိုကြားနိုင်သော်လည်းမကြာခဏ၎င်းသည် V-belts များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် V-belts များအားလုံးကိုအင်ဂျင်တစ်ခုမှထုတ်ပစ် လိုက်၍ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေမောင်းနှင်နိုင်ပြီးလျှင်ကြည့်ပါ။ အသံသည်ရပ်တန့်သောအခါရပ်သွားသည်။ ၎င်းသည်ခါးပတ်များထဲမှမောင်းနှင်နေသည်ကိုသင်သိသည်၊ ထို့နောက်စက်သီးတစ်ချောင်းစီကိုလှည့ ်၍ လှည့်ပါ၊ လှုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြိတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ထို့နောက်သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်ပြောနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပြaနာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကအသံကိုမြည်နေတုန်းပဲ။ သင်ကြိုးကြိုးတွေချွတ်လိုက်တယ်၊ ဘရိတ်တွေကိုစစ်ဆေး၊ ဆူညံသံတွေအများကြီးထွက်လာတယ်။ s ကိုဆုတောင်းပါကမကြိုက်ဘူးလားဆုတောင်းပါ၊ အင်ဂျင်၏အတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ဂီယာအုံ၏အတွင်းပိုင်းတွင်ငွေအမြောက်အများပါဝင်သည်။ အသီးဖျော်ရည်ဖျော်ရည်ကခန္ဓာကိုယ်နှင့်အင်ဂျင်ပိတ်ဆို့မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်မြေပြင်ဝါယာကြိုး၏ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။ ကားသည်လိုအပ်သောလျှပ်စစ်ဖြစ်သည်။ သတ္တုသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနိမ့်သည်။ ထို့နောက်ပါဝါကေဘယ်ကြိုးအားလုံးသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုံမှန်လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုအတွက်သင်၌ပါဝါနှင့်မြေပြင်ရှိဖို့လိုသည်၊ ဝါယာကြိုးတွေကဘက်ထရီကနေဘောင်အထိ၊ ဘက်ထရီကနေအင်ဂျင်အထိကောင်းပါတယ်၊ သူတို့ကိုသင်မကြာခဏဖယ်ရှားပြီးလျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာနဲ့ကောင်းကောင်းသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးသူတို့ကိုထွန်းလင်းအောင်လုပ်ပေးပါ။ သင်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးနောက်သူတို့ကိုအပေါ်အချို့သောချေးကာကွယ်မှုထားတောင်မှလေပေါ်မှာပနိုင်ပါတယ်, မတိုင်မီအရင်ကငါ screw နှစ်ခုအားလုံးပက်ဖြန်းပြီးတော့သူကအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူသူတို့ကိုထားပြီးတော့သူကပင်အလုပ်မလုပ်ဘူးသောသူကောင်လေးတစ်ယောက်သိတယ်, သင်မူကားရှိသည်ဖို့ရှိသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရမယ် t မြေပြင်, ဒါကြောင့်သင်ဤမြေပြင်ဝါယာကြိုးများသေချာစေရန်ရှိသည်နှင့်ကားဟောင်းအဟောင်း၌ငါသံချေးနှင့်အများကြီး corroded, ဒါကြောင့်သူတို့ကသင်ကဲ့သို့သူတို့ကိုလျှင်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ်အစားထိုးရုံအလျင်အမြန်လျှင်ငါရှာနေတဲ့ အသုံးအများဆုံးကားဘတ်ဂျက် အကယ်၍ သင့်တွင် 2014 Lancer ရှိပါကသင်၏ငွေကိုoneရာမတစ်ခုအတွက်မထုတ်ပစ်ပါကသင်အနည်းငယ်လိုချင်ပါကအသုံးပြုရန်ကောင်းသော Camry (သို့) Corolla သို့မဟုတ် Oncivic ကိုအသုံးပြုထားသောကားကောင်းတစ်စီးရနိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့ကားလေးပါ၊ ရှေ့ဆက်သွားပါ။ ဒီ Lancer ကိုမဝယ်ပါနဲ့။ သူတို့မှာပိုက်တွင်းရှိတယ်။ မင်းအဲဒီလိုတစ်ခုခုမဝယ်ချင်ဘူး၊ SI မှာ ၁၉၉၅ Audi A4 ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆိုးရွားသည်။ ထိုင်ခုံများရေနှင့်ရှလကာရည်များအပါအ ၀ င်သားရေကူရှင်ချုပ်၊ အဆင်ကောင်းသည့်ရေရှလကာရည်သည်သန့်ရှင်းသည်။ သင်သည်၎င်းကိုအရာအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ငါဒီအင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီကိုသုံးတဲ့သားရေထိန်းပစ္စည်းများ၊ အခုသူတို့သေတ္တာပို့လိုက်တဲ့နာမည်ကိုတောင်ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါ။ သားရေထိုင်ခုံများပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသားရေသည်အသားအရေသန့်ရှင်းစေလိုသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်သန့်စင်လို။ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းလိုသည့်ပိုမိုလုံခြုံသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကသန့်ရှင်းတဲ့ရေပဲ။ ဆိုလိုတာကသန့်ရှင်းရေးကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်ကသားရေဂျာကင်တွေလိုပဲ၊ ရေနဲ့အဲဒီလိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်တာပါ။ ဒါပေမယ့်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းတွေလည်းသုံးတယ်။ သားရေဂျာကင်တွေအတွက်တူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါသုံးတယ်၊ သားရေဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ် ၀ တ်ဆင်ခဲ့ပြီးဒီနို့သီးခေါင်းသည်ယိုယွင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအသားရေကားထိုင်ခုံများမတပ်ဆင်မီနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ mink oil ကိုအသုံးပြုပြီးကောင်းကျိုးများစွာရရှိသည် mink oil သည်အလွန်ပါးလွှာသည်ကိုကြည့်ပါ။ သင်တို့ကိုလက်နှင့်ပွတ်တိုက်လျှင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသုတ်ပြီးသားရေကိုလည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့စေသည်။ သို့သော်အရေပြားထိုင်ခုံပေါ်တွင်သင်မပြုလုပ်လိုပါ၊ အကြောင်းမှာဖုန်အနည်းငယ်ကျန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သားရေဂျာကင်အင်္ကျီကိုသာဂရုမစိုက်ပါ။ ခြောက်သွေ့အောင်ချိတ်ထားပြီးခဏအကြာတွင်သူတို့လုပ်သည့်သားရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းများကိုစမ်းကြည့်ပါလိမ့်မည် သားရေထိုင်ခုံများအတွက်သာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဘရိတ် pads ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အစားထိုးဖို့စျေးသက်သာသလား။
ဒါကြောင့်သင်စဉ်းစားအရာအားလုံးနှင့်အတူ, သင်၏အလုပ်အပေါ်ယူအစားထိုးမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘရိတ်သင်ကသင်ပေးရမည့်ငွေပမာဏကိုနှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်အထိသိမ်းဆည်းနိုင်သည်ပြုပြင်ဆိုင်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့မင်းရပြီအစားထိုးဘရိတ် pad ပါနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှာပြုသောအမှုရဟတ်အလုပ်ပြုပြင်ဆိုင်ဖွင့်ပြုပြင်အာမခံအောက်မှာဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။11ပြီလ ၁၁ ရက် 2020
မင်းရဲ့အင်ဂျင်ကိုဖွင့်ပါ၊ Curtis ကဟေး Scotty ကသင်ပြုပြင်ရမဲ့အလိုက်ဆုံးဆုံးအိမ်ပြုပြင်မှုကဘာလဲ။ ကျေးဇူးပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာကသူတို့ရဲ့ကားကိုဘရိတ်လုပ်ပြီးနောက်ပြန်ချလိုက်တာပါ၊ သူတို့ကပုံသဏ္sameာန်တူတာကြောင့်ရပ်တန့်သွားကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် rotors ကိုဖိအားပေးတဲ့ဘရိတ်အုပ်ပစ္စည်းတွေကသူတို့ကိုသံချေးကချုံ့ပေးတယ်။ ဒါ့အပြင်သတ္တု -on-metal တွေအားလုံးကိုစားလိုက်သလိုမျိုးကျွန်တော်လည်း rotors တွေကိုအစားထိုးရတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအံ့သြစရာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်လို့အခုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ သင်ကသူတို့ကိုဇောက်ထိုးချထားလို့ရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအတူတူပဲ၊ တစ်ဖက်တည်းမှာပဲဘရိတ် pads ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုကသတ္တုစပ်ရှိတယ်။ တစ်ခုမှာလုပ်လား သင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြုပြင်သည့်စက်ယာဉ် Westy testy ကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာများကိုအသုံးပြုသင့်သည်မှာလုံးဝအသစ်သောတာယာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တာယာအသစ် ၄ လုံးလုံးလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တာယာအသစ်များ ၀ ယ်ရန်အကြံပေးသည်။ ယခုတွင်သင်အသုံးပြုသောတာယာများအကြောင်းပြောဆိုသောအခါဤသူသည်အဘယ်ကြောင့်လူမှအဘယ်ကြောင့်လွှဲပြောင်းသွားခဲ့သနည်း။ သူတို့လား ယေဘုယျအားဖြင့်တာယာများသည်ရှေးကျပြီးအက်ကွဲ။ ဟောင်းနွမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခုဆိုရင်မင်းကချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ကောက်ကောက်စက်တွေရှိတဲ့inရိယာမှာနေမယ်ဆိုရင်၊ မင်းကောင်းကောင်းသုံးတာယာတွေရနိုင်တယ်။ ငါမှာဖောက်သည်တစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သူက cpa အလုပ်လုပ်တယ်။ သူရဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကဒီကြွယ်ဝတဲ့ကောင်လေးပါ။ Volvo နှင့်သူသည်လူလတ်တန်းစားများနှင့်တူသောစက်ပြင်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။ ဤ Volvo တွင်မိုင် ၁၈၀၀၀ ရှိပြီးသူတို့ကသူ့ကိုဘရိတ်ကွင်းသုံးစုံရောင်းပြီးပြီဖြစ်သည်။ ဒီကောင်လေးဆီကသုံးထားတဲ့တာယာတွေကိုသင်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာတကယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံရှိပေမယ့်များသောအားဖြင့်လူတွေမှာပြproblemsနာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့မှာပြproblemsနာတွေကြုံတွေ့ရပြီးတာယာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးများသောတာယာများထဲမှတစ်ခုကိုမ ၀ ယ်လိုပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ကကားများမှကားများကိုချွတ်ပြီး၊ တာယာအသစ်များကိုရောင်းချပြီး၎င်းတို့ကိုရောင်းချသောကောက်ကောက်စက်ပြင်စက်ကိုသင်ရှာနိုင်လျှင်ချက်ချင်းပင်ဆက်သွားပါ။ မည်သည့်ကားသည် Grand Am၊ ၃၄၀၀ ၀ င ်၍ ၃.၅၀ ၀ င ်၍ g6၊ ၃၄၀၀ ၀ င်ငွေ g6 သည် ၃၄၀၀ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောကား၊ ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်ဂျင်ဖြစ်သည်၊
သူတို့ဟာသင်သိတဲ့အင်ဂျင်တွေပါ။ ငါမနှစ်သက်တာကိုဆိုလိုတာပါ၊ မင်းရဲ့အသက်အရွယ်အိုမင်းလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့အလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကအရှိန်မြင့်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် 3400 တကယ်တော့တော်တော်အင်ဂျင်နီယာပဲ။ ကျန်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကတော့သိပ်မပူဘူး။ မင်းသူတို့ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့သိတယ်၊ သူတို့တွေ Pontiac ကိုမလုပ်ခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ။ GM ကသူတို့ကိုကုန်ကျစရိတ်တွေလျှော့ချဖို့လုပ်တာကိုရပ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကီလိုမီတာ ၆၀၀၀၀ ရှိသော BMW m3 ကို ၀ ယ်ရန် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် M-series သည်အထူးစီးရီးများဖြစ်ပြီးသင်မောင်းနှင်ရတာပျော်စရာကောင်းသည်။ ဘာလဲ။ မိုင် ၆၀၀၀၀ သည်မိုင်ပေါင်း ၃၂၀၀၀ နှင့်ဆင်တူသည်။ သင်သိပ်မပေးရလျှင်မိုင်များစွာမဟုတ်ပါ၊ ယခု၎င်းတို့သည်စုဆောင်းစရာပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ငွေပမာဏအချို့ကိုသင်ပေးရမည်။ မင်းရဲ့တနင်္ဂနွေကစားစရာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ အရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ကားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူနဲ့ဝယ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကအဲဒါကိုသူရူးနေတယ်၊ ​​ဒါဆိုမင်းသူရည်းစားကငါထင်တာတစ်ခုခုမောင်းတာသိတာပေါ့ , သူတို့သည် Toyota Highlander ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကားမောင်းသည့်အခါကစားစရာများအတွက် m3 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ ၎င်းအတွက်ငွေအမြောက်အများမပေးရ၊ သို့သော်သူတို့သည်အလက်ဇန်းဒါးကိုစုဆောင်းထားသောကြောင့်သင်ငွေပေးရသည်။ Dierker က Scotty ၏ 03 Corolla တွင် misfire codes များစွာရှိပြီးမီးခိုးငွေ့များမှထွက်သောအရည်များကိုထုတ်ပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အရည်သည် h ထွက်ပေါ်လာသောအခါမှန်ကန်တဲ့လည်ပတ်မှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါခေါင်းကိုညှပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကအမြဲတမ်းလွင့်မျောနေတဲ့ခေါင်းညှစ်နေပြီ၊ အခုမင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အလွယ်တကူစစ်ဆေးလို့ရပြီ။ ငါဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်fသင့်ရဲ့ cylinder head gasket ကိုလွင့်ပြီး Amazon test ကနေဒေါ်လာ ၃၀ လောက်အကုန်စမ်းပြီးသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍ အဲလိုဆိုရင်တော့ကားကိုဖယ်ရှားဖို့စဉ်းစားလို့ရလိမ့်မယ်၊ ဒီအင်ဂျင်ကိုဖြုတ်ယူပြီးပြန်လည်စုစည်းဖို့ငွေတွေများတယ်။ ဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလူအနည်းငယ်ပဲသိတဲ့အချိန်မှာငါငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့။ ပိုပြီးလွယ်ကူတယ်၊ ရိုးရှင်းတဲ့မော်တာတွေပါ။ သူတို့ကိုခွဲခြားပြီးလေးနာရီလေးနာရီမှာပြန်လည်စုစည်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အသစ်တွေကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်၊ ပထမဆုံးဒီစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ပါ၊ Scotty ရဲ့အတွင်းပိုင်းအတွက်စျေးပေါတဲ့ကားမော်ဒယ်များရှိမယ်၊ အဲဒါကိုထူးခြားတဲ့အရောင်၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရောင်၊ အရာရာတိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်စုံ LED မီးသီးများရပြီးသင်လိုချင်သည့်နေရာတွင်မတူညီသောမီးသီးများထားနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဇနီးရှိသည့် Lexus ထဲသို့ထည့်လိုက်သည့်အလွန်ထူးဆန်းသည့်ဖျာပြားများရှိသည်။ ၎င်းသည်သားရေကျောထောက်နောက်ခံရှိပြီး၎င်းသည်လျှပ်တပြက်ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းဖျာကတကယ်ဟောင်းနွမ်း ca ကိုပြုပြင် rpet system ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအရာအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွက်သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာကိုအသုံးမလိုဘဲသင်လုပ်နိုင်တာတချို့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကားအသစ်ဆောင်းပါးတွေမှာသင်ဟာအသစ်အဆန်းမဟုတ်ရင်လွဲချော်ချင်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းလောင်းသံကိုသတိရပါ။
A: OEM ဆိုသည်မှာ“ မူရင်းပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူ” ဖြစ်သည်ဘရိတ် padsယာဉ်နှင့်အတူလာသောသူတို့အားကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည်။ အပေါ်ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းဘရိတ် padsအော်ဂဲနစ်၊ Semi- သတ္တုသို့မဟုတ်ကြွေထည်များဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်aftermarket padsတခါတရံတွင်ကဲ့သို့ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်ပိုကောင်း-ထက်OEM ။ဖေဖော်ဝါရီ ၄ 2018
Theပျမ်းမျှဘရိတ် pad ပါအစားထိုးကုန်ကျစရိတ်၀ င်ရိုးတစ်စည်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်ကုန်ကျစရိတ်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ပေါ် မူတည်၍ ၀ င်ရိုးတစ်ဒေါ်လာလျှင်ဒေါ်လာ ၃၀၀ အထိမြင့်နိုင်သည်ဘရိတ်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ။ အနည်းဆုံးစျေးကြီးသည်ဘရိတ် padsအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းကိုသုံးပါ။
ဘရိတ် pads ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ။
ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာသင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကွမ်းယာဆိုင်အဆိုပါထိတွေ့ဆက်ဆံသည့်အခါအဖြစ်ကောင်းစွာရဟတ်အဖြစ်ကြာရှည်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်ဘရိတ် pads။ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု - ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုနှင့်ခြေနင်းပင်အပေါ်သို့ဖိအားမည်မျှခံစားရသည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်ဘရိတ်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ် ဖုန်မှုန့်အဆင့်များ -ဘရိတ် padsထို့နောက်သင့်ဘီးနှင့်ကပ်နေသောဖုန်များစုဆောင်းနိုင်သည်။ဒီဇင်ဘာ ၁၃ 2018
မှတ်ပုံတင်ပြီး ငါကအခုအချိန်မှာ Blade ကိုစီးနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးGoldfren padsသူတို့ကိုငါအနှစ် ၂၀ နီးပါးအသုံးပြုနေပြီ။ ငါကသူတို့ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ပါဝါနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုရှာပါ။ သူတို့ကဲ့သို့ calipers န်းကျင်တစ် ဦး လည်ချောင်းနာအနက်ရောင်အကြွင်းအကျန်မထားကြဘူးတချို့ padsလုပ်တယ်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ 2016
ဘရိတ် pads 100k မိုင်ကြာရှည်နိုင်ပါသလား?
မက္ကင်းနစ်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများသည်သဘောတူညီချက်ရှိသည်မိုင်ပတ်ပတ်လည် 30000 မှ 70000 အထိထောင်နှင့်ချီဒါပေမယ့်ပုံပြင်များကွမ်းယာဆိုင်တစ် ဦး မျှသာ 100 ရေရှည်တည်တံ့ထောင်နှင့်ချီအံ့သြစရာသိန်းတထောင်လည်းတည်ရှိ။14ပြီ ၁၄ ၂၀၁၄
ဘယ်လောက်မိုင်ဘရိတ်လုပ်ပါအများအားဖြင့်နောက်ဆုံးမင်းရဲ့ကားလား အများအားဖြင့်ဘရိတ်အစားထိုးသင့်တယ်မိုင်ပေါင်း ၅၀၀၀၀ မှ ၇၀၀၀၀ အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းအချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်မိုင်ပေါင်း ၂၅၀၀၀ အထိနိမ့်ကျနိုင်သည်။ဇန်နဝါရီ ၈ အောက်တိုဘာ 2018
အကောင်းဆုံးရော်ဘာဘရိတ်နင်း pad ပါကဘာလဲ
DORMAN 20731 အကူအညီ! clutch နှင့်ဘရိတ်နင်း Pad ။ ။ DORMAN 20771 PEDAL-UP! ဘရိတ်နင်း Pad ။ ။
အစားထိုးနိုင်သည့်ဘရိတ် pads ရှိပါသလား
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အက်ကွဲခြင်း၊ ၀ တ်ဆင်ခြင်း (သို့) ပျောက်ဆုံးနေသော pads များအတွက်တိုက်ရိုက်အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လုံခြုံမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ဘရိတ်နင်းသို့လုံခြုံသောဆုတ်ထားသည့်မျက်နှာပြင်ကိုပြန်ယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစားထိုးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ - Replacement ဘရိတ်နင်းပလပ်များ Get - အစားထိုးပါ။
ဤပွတ်တိုက်မှုသည်သင်၏ pads မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လည်းကျိုးပဲ့ပြီးခြေနင်းဖိခြင်းကိုခံရသည့်အခါ rotors ထိသောပွတ်တိုက်ပစ္စည်း၏အထူကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဟောင်းနွမ်းနေသောဘရိတ်အုပ်သည်သင်၏ကားကိုရပ်တန့်ရန်ရုန်းကန်နေရပြီး၎င်းတို့သည်သင်၏ကားစက်များကိုပင်ပျက်စီးစေနိုင်သည် AutoZone မှဘရိတ် pad အသစ်များဖြင့်လမ်းပေါ်တွင်ပျက်စီးမှုကိုရပ်တန့်ပါ။